खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page3of 5988 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 3
By खबर मञ्च / June 29, 2022 / अर्थतन्त्र, कृषि/पशुपालन / Comments Off on आज राष्ट्रिय धान दिवसः धान/चामल आयातमा अर्बौं रकम बाहिरियो
झापा । आज राष्ट्रिय धान दिवस। सरकारले विसं २०६१ देखि असार १५ का दिन हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ । मुलुक कृषि प्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्व दर्साउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो । हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ । मलिलो र बढी उब्जनी हुने […]
बाढीले झापाका २७७ घर डुबानमा
By खबर मञ्च / June 28, 2022 / समाज / Comments Off on बाढीले झापाका २७७ घर डुबानमा
झापा । दुई दिनदेखि लगातार परेको भारी वर्षाका कारण झापामा २ सय ७७ घर डुबानमा परेका छन्। भारी वर्षाका कारण झापाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। नदी तटका स्थानीयवासी बाढीको प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार अहिलेसम्म २ सय ७७ घर डुबानमा परेका हुन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिका १ मा बनियानी खोलामा आएको बाढी […]
भारी बर्षाले झापामा कहाँ कति बिगार्यो ?
By खबर मञ्च / June 28, 2022 / समाज / Comments Off on भारी बर्षाले झापामा कहाँ कति बिगार्यो ?
झापा । विगत २४ घण्टा भन्दा लामो समयदेखि भारी बर्षाका कारण झापाको जनजीवन प्रभावित पर्दै गएको छ। नदी तटका स्थानीयबासी बाढीको प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिका १ मा बनियानी खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा ४ घर परिवार बिस्थापित भएका छन्। कमल तथा बनियानी खोलाले शिवसताक्षी नगरपालिकाका ३, ४ र […]
जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश